Antonio Pérez Henares. Kubvunzana nemunyori we Cabeza de Vaca | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Antonio Pérez Henares. Twitter nhoroondo.
Antonio Perez Henares inoburitsa bhuku idzva nhasi: Musoro wemombe, pamufananidzo weSpanish mukundi wezana ramakore rechi XNUMX. Mutori wenhau uye munyori, rake regore rechishanu basa mune vezvenhau uye zvinyorwa zvinyorwa kubva kune yakasarudzika uye inokanganisa zvematongerwo enyika, magariro uye tsika kuongorora. mabhuku anodarika zviuru makumi maviri.
Ndipe izvi indavhiyu , que Le ndinotenda zvakawanda, pamwe nemutsa wako uye nguva yakashandiswa kutitaurira zvishoma nezveako mabhuku avanofarira uye vanyori, yako pesvedzero kana yavo kuverenga y tsika yemunyori. Uye zvakare anotaura nesu nezvemaonero aanoona nguva dzino mu Panorama yekunyora.
Pérez Henares (Bujalaro, Guadalajara, 1953), anozivikanwa sa chani, ndizvo munyori, mutori wenhau uye mufambiIyi hobby haidi kusiya. Kubva achiri mudiki kwazvo akatanga kushanda mupepanhau Pueblo, uye akapfuurawo Nguva, Tribuna, Chikonzero o Digital Mutori wenhau, kudoma mashoma ma media enhau.
Nzira yake se munyori Iyo zvakare yakakura kwazvo, iine basa rinotamba akati wandei masitayera, asi neakasarudzika kufanirwa kweiyo dingindira renhoroondo, chaizvo, ne prehistory. Set mairi ndiyo iyo trilogy iyo inogadzirwa Kusviba, Mwanakomana wehwani y Muvhimi wekupedzisira. Mamwe mazita ari Rwiyo rwenyati, Kutaridzika kwemhumhikana Nyika ye oflvar Fáñez.
Zvakare ane mabhuku ekufambisa Chemhondoro Ngowani yenzendo nomwe y Shiri yekushanya; o kudzidzira Chemhondoro Iwo matsva madzishe feudal o Vanokudzwa uye vanhuwo zvavo.
ANTONIO PÉREZ HENARES: Zvakanaka, kunyange zvichinzwika sezvisinganzwisisike, vakandipa mudiki kwazvo el Quixote. NaReyes. Ndakanga ndichiri kugara mutaundi rokwangu, Bujalaro, uye ndakarirava ipapo kutambanuko huru; Ndakafarira zvikamu uye mune vamwe ndakazvirasa uye handina kunzwisisa chero chinhu. Ndakaiverenga mushure menguva zhinji uye imwe neimwe ndakakoshesa zvakanyanya.
Y nyaya yekutanga zvandakanyora zvaive Maonero kubva kuPicachuelo. Yakatsanangurwa iyo mabasa ekukohwa zvakanyorwa pamarangariro angu ehudiki. Ini ndaive wechipiri muNational Youth Narrative Award. ndanga ndine 15 makore.
KU: Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
PHA: Bhuku remhandara masango, naRudyard Kipling. Ndichinayo paatari. Imbwa yangu yapfuura, yakafa gore rapfuura, yakatumidzwa Mowgli shure kwake.
APH: Ndiri chaizvo Cervantes. Galdós uye Delibes kupedzisa podium yangu yeSpanish.
PHA: naoh, mwanakomana weNgwe, protagonist we Hondo yemoto, yeiyo Rosny. Kutanga kubva kwangu passion by the prehistory.
PHA: Ndakaverenga nekunyora ndichimhanya, pamoyo. Kana ini ndisinganzwe iwo manzwiro, ini handiverengi kana kunyora.
APH: Zvino zvangu kabhini yehuni pakati pegomo, mu Juniper.
APH: Vazhinji. Iye zvino Juan mumwe chete Slav Galán uye Arturo Perez-Reverte.
APH: Wekare uye wakanaka ruzivo rwekunakidzwa and the North America mhosva yekuparwa.
APH: Ndini kuverenga zvekare mamwe anoshanda naClaudio Sanchez Albornoz. Uye ini ndinonyora bhuku ra Ensayo, pachedu.
APH: Tumira ku paperi Ndinotya kuti zvichazosvika zvakanyanya kuoma. Asi ini ndinogara ndichifunga kuti chero munhu ane chaanoda kutaura anopedzisira azviwana.
APH: Ndinofunga izvi kupfuura dambudziko. Uye kune madhiraivha uye pfungwa , que vanondinetsa zvakanyanya uye vane chekuita nei libertad, neIye Huru Orwellian Ziso uye hudzvanyiriri hweiyo pfungwa imwe chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Antonio Pérez Henares. Kubvunzana nemunyori weCabeza de Vaca
"Kuora mwoyo". Nhetembo inorumbidza macabre uye inotyisa